Ciidanka JWXO oo dagaal kadhacay duleedka Iimey cashar ugu dhigay Woyanaha. | ogaden24
Ciidanka JWXO oo dagaal kadhacay duleedka Iimey cashar ugu dhigay Woyanaha.
Ciidamada Qalabka sida ee xoraynta Ogadenia iyo ciidamada Woyanaha ee kusugan wadanka Ogadenia gaar ahaan Gobolka Shabeele, ayaa waxaa dhex maray dagaal cashar loogu dhigay ciidamada Woyanaha iyo adeegayaashooda.
Dagaalka oo kadhacay duleedka degmada Iimey Bari ayaa sida warka aanu kuhelay waxaa ciidamada Woyanaha iyo koox katirsan maleeshiyada Liyuuga oo lasocotay lagu Gaadhsiiyay khasaare xoogan oo isugu Jira dhimasho dhaawac iyo Hub badan oo laga Furtay.
Warkan oo aan kahelay xarunta dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa faah faahin kabixinaya dagaalkan oo ahaa mid ay ciidanka JWXO si qurux badan usoo qorsheeyeen, waxaana warku sheegayaa in ciidamada Woyanaha iyo kooxda lasocotay ay awoodi waayeen inay iska difaacaan weerarka oo ciidamada JWXO si Hufan u diyaariyeen.
Dagaalkan oo dhacay 19/1/17 ayaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay inta lahubo 12 askari 20 kalana waa lagaga dhaawacay, sidoo kale waxaa dagaalkan ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare dhaqaale oo kala duwan. Dagaalkan ayaa lasheegayaa in uu kadhacay deegaanka Goojo oo Dagmada Iimaybari katirsan halkaas oo ah goobku fiican istaraatiijiyada dagaalka.
Loolanka u dhexeeya ciidamada Qalabka sida ee JWXO iyo ciidamada Woyanaha iyo maleeshiyaadka ay carbisteen ayaa si Joogta ah uga socda inta badan Gobolada wadanka Ogadenia, waxaana dagaaladaasi cadawga lagu Gaadhsiiyo khasaare kala duwan.